Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံမှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိနေကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ပြောကြား
တရုတ်နိုင်ငံမှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိနေကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ပြောကြား
တရုတ် အင်ဒိုနီးရှား ကာကွယ်ဆေး COVID-19
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါအတည်ပြုလူနာနှစ်ဦးတွေ့ရှိကြောင်း သမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုက ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် ဂျကာတာမြို့ရှိ COVID-19 ရောဂါ ကုသရေးဆေးရုံကြီးဖြစ်သော Dr. Sulianti Saroso ဆေးရုံကြီး၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂ ရက်တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး Terawan Agus Putranto က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်နေစဉ် (ဆင်ဟွာ) Asia
ဂျကာတာ၊ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)ဘာသာပြန်/ကိုငယ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသော တရုတ်နိုင်ငံထုတ် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများသည် ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိနေကြောင်း နှင့် ယင်းကာကွယ်ဆေးများဖြန့်ဖြူးရာတွင် မပျက်စီးအောင် ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံအောင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ရန်အတွက် အအေးခန်းပါ မော်တော်ယာဉ်များကို ကောင်းစွာပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး Terawan Agus Putranto က ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင် စစ်ဆေးမှုတွေကို တိကျစွာလုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်ရပါမယ် ၊ ဒါကြောင့် ဒီကာကွယ်ဆေးတွေဟာ ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကျွန်တော်တို့အသေချာပြောနိုင်ပါတယ် ၊ ထုတ်ပိုးမှုအပိုင်းမှာရော ဒါမှမဟုတ် ပါဝင်မှုပမာဏအပိုင်းမှာပါ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါဘူး ၊ ပြီးတော့ အဲဒီဆေးဝါးတွေကို သယ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ ဒါမှမဟုတ် ပို့ဆောင်ဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာမှာလည်း ထားရှိရတဲ့ အပူချိန်ဟာ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်” ဟု ယနေ့ပြုလုပ်သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဝန်ကြီးက ဖြေကြားခဲ့သည်။
ကာကွယ်ဆေးသိုလှောင်ရုံတစ်ခုသည် သတ်မှတ်အစီအစဉ်အတိုင်း အအေးခန်းကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့်အတူ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinovac ကာကွယ်ဆေး ၁.၂ သန်းကို သိုလှောင်သိမ်းဆည်းပေးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ ထို့ပြင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဒေသအနှံ့အပြားရှိ ခရိုင် နှင့် မြို့ကြီးများရှိ ကျန်းမာရေးမှူးရုံးများသို့ မပေးပို့မီ ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးမှူးရုံးများသို့ ဦးစွာ ဖြန့်ဖြူးပေးသွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်းလည်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပိုင် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Bio Farma အနေဖြင့် ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရေးကာလအတွင်း ကာကွယ်ဆေးထားရှိရာ အခန်းအပူချိန်ကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရန် ကောင်းမွန်သော အအေးခန်းသိုလှောင်စနစ်များနှင့်အတူ မော်တော်ယာဉ်များကို အသင့်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း ၊ ထို့ကြောင့် ကာကွယ်ဆေး၏ အာနိသင်ကို ကောင်းစွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးက ဆိုသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ၊ ကျန်းမာရေးလုပ်သားအကူများ နှင့် ဆေးရုံဆေးခန်းများတွင် ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေသူများအား ဦးစားပေးထိုးနှံပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီး၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ Antara သတင်းအေဂျင်စီက ဖော်ပြခဲ့သည်။(Xinhua)
#အင်ဒိုနီးရှား,#တရုတ်,#COVID-19,#ကာကွယ်ဆေး,#ဖြန့်ဖြူး #Indonesian, #COVID-19, #China, #vaccine, #good, #ဆင်ဟွာ
Indonesia's state pharmaceutical company Bio Farma has been ready with vehicles with good cold storage facilities to monitor the vaccine temperature during the trip, so that the quality of the vaccine is well maintained, the minister said
Photo caption - Terawan Agus Putranto, minister of health of Indonesia, speaks to media in Dr. Sulianti Saroso hospital, where the patients infected with COVID-19 being treated in Jakarta, Indonesia, March 2, 2020. Two Indonesian nationals have been infected with COVID-19 in the country, Indonesian President Joko Widodo said on Monday, marking the first confirmed cases in Indonesia. (Xinhua/Du Yu)
Previous Article သမ္မတရှီက ဘာကီနာဖာဆိုသမ္မတအဖြစ် ထပ်မံရွေးကောက်ခံရသော Kabore ထံ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူ ကြောင်း သဝဏ်လွှာပေးပို့
Next Article RCEP သည် တရုတ်-အာဆီယံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ပိုမိုလျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ဖော်ဆောင်ပေးမည်ဟု စင်ကာပူပညာရှင်ပြောကြား